Enda Pampered kuChanghai's Xiao Nan Guo Spa
Wana Massage, Iva Kudya, uye Tamba Mahjong
Spas, massage, Chinese mishonga yemagariro, utano; ivo vose vari pamunwe wako muShanghai . Iwe unogona kupedza yakaenzana nemadhora emadhora eAmerica pamaminitsi makumi matatu emakumbo okuzorora kana kuenda kunze kune imwe hofisi yehotera yechishanu neyebhokisi kunze kwemazana zana. Uye pane zvakawanda mukati. Iwe unofanirwa kuzvipa iwe pachako uri muguta, asi zviri kwauri iwe kuti unopedza mari yakawanda sei.
Kana iwe uchida zvakanaka pakati-ne-mutsara, kwete kunyanya kudhura asi nemari yakakosha yemari, hafu yezuva ku Xiao Nan Guo inzvimbo yakanaka yekutanga.
Iwe unogona kuenda uri woga kana neshamwari; ichi chinhu chinoshamwaridzana muChina.
Sarudza uye sarudza menyu inopa dizzying array yekurapa kusarudzwa
Vhura maawa gumi nemashanu kuitira kuti uende kana uchida uye upedze nguva yakareba; hapana kushandiswa kunodiwa
Iwe unosvika pakupfeka kunotyisa-kudhinda mumumuu kuti ugare mukati mazvo
Iwe unofanirwa kupfeka muumuu kuti ugare mukati mawo (varume vanowana tropical-print shorts & shirt)
Hapana kusvuta zviratidzo zvisingabatanidzwi munzvimbo huru yekugara
Zvose About Xiao Nan Guo Spa
Xiao Nan Guo Spa inokosha yakachengetedzwa zvakanaka. Zvinonyanya kuzivikanwa nezvezvokudya zvaro muShanghai zvinoshumira zvidimbu, zvekudya. Imwe yezvitsuwa zvayo muShanghai inewo spa huru inosanganiswa nayo. Tora danho rimwe mukati me cavernous spa nzvimbo uye iwe usambosiya.
Imwe nzvimbo isingasviki chete spa nekutengesa, iyo inzvimbo yakazara yevaraidzo yezvivako nemakamuri emabhiridhi, mahjong makamuri, nzvimbo yekutamba yevana, nzvimbo yekutamba, mass salon nekutengesa mabhiza, uye makamuri ega eVIP.
Iyi ndiyo nzvimbo yakakwana yeboka remahara, kubuda kwemhuri , kambani yekambani kana vakaroorana vakaneta vari kunze kubva kune imwe ndege huru .
Paunenge uchifamba, chengeta shangu dzako pamukova. Ita sandals yako yejubheri uye uende kune spa. Bvisa zvese zvekupfeka (kwete nzvimbo yekunyara pano) uye uende mumvura yekugeza / spa.
( Heino zvakawanda pamusoro pezvokudya zvepa spa muChina .) Ivai nebhaji kutanga uye movhara mumvura yakasviba kana mumucheka wemukaka kana kuti mutungamiri kunze kweJapan-style rotenburo chitubu chemvura. Panewo nzvimbo yemvura uye sauna kuti inakidzwe usati wasvika pakunyorera. Gadzirira wakarasikirwa nemasendi enyama pano; vakadzi vacho vanoshandisa mitambo yekuchera mapurasitiki kuti vashandise masendimita emuviri wako wose. Kumbira chikafu chekichikiti uye kupedzisa nemukaka uye uchi. Dzorera uye dzoka zvakare muchinzvimbo chokuchinja.
Massage uye Lunch
Mushure mekupfeka muikiu inotarisirwa, enda kumusoro kwechipiri-floor lounge uye uzvigadzirire pasi pasi. Rongedza chero hupi hwehuwandu hwemasasa; a terrific combo ihora-refu rutsoka rwekusimbisa pamwe chete neshuni inoputira. Zvadaro gadzirai mamwe mashoma uye garai uye musunungure. Hapana nguva yemazuva, saka unogona kuvhara uye kugara kusvikira kudya kwemanheru.
Lai Ona Red Envelopes muHong Kong - Zvipo zveNyika Itsva yeChinese
15 Nzvimbo Dzakakosha dzeMangwana MuChina Dzokuti Usingafaniri Kuona Panguva Yaunofamba
Nhungamiro Pfupi Yokufamba Nenzira Dzakanaka dzeChina Makomo
Mushanyi weMamiriro ekunze uye Mutsara wekuenda kuChina munaDecember
Krisimasi Ne UK UK Trust
Nzira Dzakaita Kuti Uzive Pasi Pose muOrlando
Makamuri Makuru 13 Akanakisisa muSan Diego
Izvo Zvakachengeteka Kuenda kuKashmir?
Lewis naClark Sites muIdaho
Disney Zvisarudzo: Mapoka Emaji Ndiwo Anofara uye Anopfuura Kupfuura Kunokosha Kunotenga Here?
MARC Training Service: Chengetara Rail Line kuWashington, DC
International Phone Call Call Dial Tips for Travelers
Feri kubva kuItaly kusvika kuGreece
Mifananidzo yeOxford, Mississippi
Makuta Madiki Makuru muAfrica